Home Wararka Baarlamaanka Yurub oo dhawaan qoraal ka soo saari doono Xasuuqii Baydhabo?
Baarlamaanka Yurub oo dhawaan qoraal ka soo saari doono Xasuuqii Baydhabo?
Baarlamaanka Yurub oo asbuucaan ka soo noqonayo fasaxii sanadka cusub ayaa lagu wadaa in ay ka doodii doonaan xasuuqii ka dhacay magaalada Baydhabo ee lagu dilay in ka badan 15 qofood isla markaana lagu qafaalay musharax Shiikh Muqtaar Roobow.
Midowga Yurub ayaa bixiyo lacagta ciidamada AMISOM ee ka howlgala dalka Soomaaliya. Midowga Yurub ayaa waxa uu bilkastaa ku bixiyaa Ciidanka AMISOM aduun gaaraya $20 Milyan. Lacagta ugu badan ee AMISOM la siiyo ayaana waxa bixisa dowlada Faransiiska oo dhawaan soo saaratay qoraal aad u adag oo lagu canbaaraynaya xasuuqii ka dhacay Baydhabo iyo go’aankii aan laga fiirsan ee lagu ceyriyay mudane Nicholas Heysom.
Baarlamaanka Midowga Yurub ayaa cabsi ka qabo in dacwad maxkamadeed ka dhalato dhibkii ka dhacay Baydhabo oo lagu fuliyay lacag iyo taageero ka timid Midowga Yurub.
Qoraalka lagu wado in uu ka soo baxo baarlamaanka Yurub ayaa laga yabaa in lagu hakiyo lacagta lagu bixiyo AMISOM ilaa jawaab rasmi ah laga helo cida ka danbeeysan dhibkii ka dhacay magaalada Baydhabo. Dhanka kale Baarlamaanka oo ay hogaanka u hayaa xisbiyadda iyo kooxaha ka soo horjeeda ku tagrifalka Xuquuda Aadanaha ayaan marnaba aqbali doonin in canshuurta shacabka Yurub oo ay la soo daristay dhaqaale xumo in lacagtooda loo isticmaalo in dad lagu xasuuqo.